IHE Ị GA-EME MA Ọ BỤRỤ NA PLAY MARKET KWỤSỊRỊ NA GAM AKPORO - GWUO AHIA - 2019
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na egwu Play Market apụla na gam akporo
Play Market bụ ụlọ ahịa Google Store na ebe ị nwere ike ịhụ egwuregwu dị iche iche, akwụkwọ, ihe nkiri, wdg. Ọ bụ ya mere, mgbe ahịa ahụ kwụsịrị, onye ọrụ ahụ malitere ịtụgharị uche nsogbu ahụ. Mgbe ụfọdụ, nke a sitere na smartphone n'onwe ya, mgbe ụfọdụ na arụ ọrụ na-ezighị ezi nke ngwa ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya ihe ndị kachasị ewu ewu maka ọdịda nke Google Market site na ekwentị na Android.
Nlaghachi nke ere egwu efu na gam akporo
E nwere ụzọ dị iche iche isi dozie nsogbu a - site na ihichapụ oghere ịlọghachite ngwaọrụ ahụ. Usoro ikpeazụ bụ ihe kachasị dị egwu, ma ọ bụ nke kachasị dị irè, n'ihi na mgbe ị na-emegharị, a na-emelite ama. Mgbe usoro a gasịrị, ngwa ngwa niile na-apụta na desktọọpụ, gụnyere Market Google.
Usoro 1: Lelee ntọala ọrụ Google Play
Nfe ngwọta na ego bara uru nye nsogbu ahụ. A na-ejikọta ọrụ na Google Play na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke echekwa echekwa na data dị iche iche, yana ọdịda na ntọala. Nkọwapụta ihe ndị ọzọ nke menu nwere ike ịdị iche na nke gị, nke a dabere na onye na-emepụta smartphone na android shell ọ na-eji.
Gaa "Ntọala" ekwentị.
Họrọ ngalaba "Ngwa na Ịma Ọkwa" ma "Ngwa".
Pịa "Ngwa" iji gaa ndepụta zuru ezu nke mmemme arụnyere na ngwaọrụ a.
Chọta windo na-egosi. "Ọrụ Google Play" ma gaa na ntọala ya.
Jide n'aka na ngwa ahụ na-agba ọsọ. Enwere ihe ederede "Gbanyụọ"dị ka nseta ihuenyo n'okpuru.
Gaa na ngalaba "Nchekwa".
Pịa Clear Cache.
Pịa na "Jikwaa Ebe" ịga na njikwa nke data ngwa.
Site na ịpị "Hichapụ data niile" A ga-ehichapụ faịlụ ndị na-adịru nwa oge, ya mere, onye ọrụ ahụ ga-abanye na akaụntụ Google ya.
Usoro 2: Lelee gam akporo maka nje
Oge ụfọdụ, nsogbu nke efu nke Ụlọ Ahịa Play na gam akporo na-emetụta ọnụnọ nke nje na malware na ngwaọrụ ahụ. Maka nchọta na mbibi ha, ị ga-eji ụlọ ọrụ pụrụ iche, yana kọmputa, ebe ọ bụ na ngwa ngwa maka ngwa nbudata Google Market ka anyị furu efu. Gụkwuo gbasara otu esi elele gam akporo maka nje, gụọ isiokwu na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Anyị na-enyocha gam akporo maka nje site na kọmputa
Usoro 3: Download faịlụ APK
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ enweghị ike ịchọta Market Market na ngwaọrụ ya (a na-agbanye mkpọrọgwụ), ọ nwere ike ịbụ na ehichapụghị ya. Iji weghachi ya, ịkwesịrị ibudata faịlụ APK nke usoro ihe a ma wụnye ya. A na-atụle otu esi eme nke a Usoro 1 ihe na-esote na website anyị.
Gụkwuo: Ịwụnye Google Play Market na gam akporo
Usoro 4: Nbanye na akaụntụ Google gị
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịbanye na akaụntụ gị ga-enyere aka dozie nsogbu ahụ. Debanye na akaụntụ gị wee banye ọzọ na iji email na paswọọdụ dị irè. Echefukwala ka ime ka mmekọrịta dị. Gụkwuo banyere syncing na ịbanye na akaụntụ Google gị na ihe ọ bụla anyị.
Kwado akaụntụ Google na Google
Ịbanye na akaụntụ Google na gam akporo
Usoro 5: Tọgharia na ntọala ntọala
Ụzọ dị egwu iji dozie nsogbu ahụ. Tupu imezu usoro a, ọ bara uru ịmepụta ndabere nke ozi dị mkpa. Otu esi eme nke a, ị nwere ike ịgụ na isiokwu na-esonụ.
Gụkwuo: Otu esi kwado ndabere gam akporo tupu ịchawa
Mgbe ị na-echekwa data gị, gaa rụgharịa ntọala ntọala. Maka nke a:
Gaa "Ntọala" ngwaọrụ.
Họrọ ngalaba "Usoro" na njedebe nke ndepụta. Na ụfọdụ firmwares, lee anya maka menu. "Weghachi ma tọgharịa".
Pịa na "Tọgharia".
A na - eme ka onye ọrụ ahụ ma ọ bụ tọgharịa ntọala niile (mgbe echekwara data nkeonwe ma ọ bụ multimedia), ma ọ bụ ịlaghachi na ntọala mmepụta ihe. N'ọnọdụ anyị, ị ga-achọ ịhọrọ "Ntọala ụlọ nrụpụta".
Biko mara na ihe ndekọ niile e mekọrịtara na mbụ, dị ka ozi, ndị ozi ozugbo, wdg, ga-ehichapụ site na ebe nchekwa dị n'ime. Pịa "Tọgharia ntọala ekwentị" ma gosi nhọrọ ị họọrọ.
Mgbe ịmalitegharịrị ama, Google Market ga-apụta na desktọọpụ.
Ọtụtụ kweere na Google Market nwere ike ịla n'iyi n'ihi n'eziokwu na onye ọrụ ahụ na-ehichapụ ụzọ mkpirisi nke ngwa a site na desktọọpụ ma ọ bụ site na menu. Otú ọ dị, ngwa ngwa usoro a agaghị ehichapụ, ya mere a anaghị atụle nhọrọ a. Mgbe mgbe, ọnọdụ ahụ metụtara ntọala Google Play n'onwe ya, ma ọ bụ mmejọ ahụ bụ nsogbu niile na ngwaọrụ.
Egwuregwu Ngwa Azụmahịa
Ntuziaka maka ịmepụta ụdị dị iche iche nke Android-smartphones